Global Voices teny Malagasy » Makedonia: Mitohy Ny Raharaham-Panarahamaso Ny Fahalotoan-dRivotra ao Skopje · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 03 Marsa 2012 8:32 GMT 1	 · Mpanoratra Filip Stojanovski Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Nitsahatra tsy nanome vaovao an-tserasera intsony nanomboka hatramin'ny fiandohan'ny taona 2012  [mg] ny rafi-pandrefesana ny fahadiovan'ny [fahalotoan'ny] rivotra tao an-drenivohitra Makedonianina. Ela loatra ny fandraisan'ny fiadidiana ny tanàna ny andraikiny, ka niteraka fahatezerana teo amin'ny mponina ao an-toerana izany, izay naneho ny fisalasalany tamin'izay antony nanapahana ny fanatanterahana ity fomba mampiseho mangarahara ity.
Manohy mijery akaiky ny fandrosoan'izany raharaha izany ny Greenbox, mandefa vaovao farany foana ao amin'ny bilaoginy sy ny pejy  Facebook. Tamin'ny Febroary, niteraka tsy fifaliana faobe teo amin'ny olom-pirenena ihany koa ny tsy fahaizana manatanteraka ny fandraisana andraikitra .
Namaly ihany ny tanàna tamin'ny fanofana orinasa iray hanamboatra ny efijery toa andro taoriana  [mk], ary taorian'izany dia namoaka filazana fa eo ampikarakarana  [mk] mandritra ny taona. Manoratra ny Greenbox:
Araka ny antontan-kevitra  navoakan'ny tanànan'i Skopje eo amin'ny fitaovana elektronika mampanao tolo-bidy dia tokony hametraka tolo-bidy mialoha ny 2 marsa ny orinasa, ka izay mahavita ny mora indrindra no hofantenana. Tsy milaza manokana ny filazana raha voatery hamelona indray  ny takelaka an-tserasera “Fisefoana Skopje” , fitaovana mamoaka mivantana ny marik'isa tondroin'ny mari-pandrefesana, izay mahazo ny tolo-bidy na tsia. Io takelaka io no ahafahan'ny mponina an'arivony mahalala vaovao haingana indrindra momba ny fahalotoan'ny rivotra, izay avy folo heny noho izay fetra farany ambony azo leferina indraindray. […]
Nandritra izany fotoana izany, Greenbox nanambara  fa hamoaka izay marik'isa miseho amin'ny alalan'ny bolongana ny mpikambana ao aminy isa-maraina ary nanao izany nandritra ny folo andro farany.
Nanasa ny mpiara-monina ihany koa ry zareo haka sary izay hita eo amin'ny efijery amin'ny fotoana hafa mandritra ny andro k handefa izany any amin'ny Greenbox, satria mety hiova noho ny fiasan'ny orinasa sy ny fifamoivoizana ny taha-pahalotoana. Ny fandrefesana voarakitra mivoaka ao amin'ny Sokajy “Fisefoana Skopje”  [mk] ao amin'ny bolongana Greenbox dia nampiseho ny ambaratongan'ny kalitaon'ny rivotra nandritra ny andro faramparany, miainga amin'ny “mahafarofy” mankany amin'ny “eo ho eo ny fahalotoana” ka hatramin'ny “madio.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/03/03/29510/
 Nitsahatra tsy nanome vaovao an-tserasera intsony nanomboka hatramin'ny fiandohan'ny taona 2012: https://mg.globalvoicesonline.org/2012/02/10/28715/
 tsy fahaizana manatanteraka ny fandraisana andraikitra: http://greenbox.com.mk/blog/?p=2486
 hanamboatra ny efijery toa andro taoriana: http://greenbox.com.mk/blog/?p=2520
 namoaka filazana fa eo ampikarakarana: http://greenbox.com.mk/blog/?p=2529
 hamelona indray: http://greenbox.com.mk/blog/?p=2389
 “Fisefoana Skopje”: http://www.skopjecentar.ekoinformatika.mk/
 Sokajy “Fisefoana Skopje”: http://greenbox.com.mk/blog/?tag=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%98%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5